I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Angela
Ukuhamba nje imizuzu emi-5 ukuya endaweni yokufinyelela yangakithi eGreers Ferry Lake, i-Heber Hideaway iyindawo yakho ekahle yokubalekela ichibi! Indawo yethu yesitayela se-studio yezivakashi iyimfihlo kakhulu okuhlanganisa nesango layo lokungena, igumbi lokugezela, umbhede olingana nendlovukazi, nekhishi elihlanganisa isiqandisi esigcwele usayizi, i-microwave, ihhavini le-toaster, ipuleti elishisayo negridle yokupheka. Umgwaqo wethu othule useduze nomgwaqo omkhulu futhi useduze kakhulu ne-Walmart, izindawo zokudlela, izindawo zolwandle zasendaweni, intaba ye-sugarloaf, kanye nomfula omncane obomvu!
Leli fulethi elincane lesitayela se-studio lilingana nazo zonke izidingo zakho! Eduze kwedolobha, izindlela ezinhle zokuhamba izintaba, izindawo eziningi zokudoba ama-trout kanye nokuhamba imizuzu emi-5 ukuya echibini.
Umbhede omkhulu ongu-1, imibhede yomoya engu- 1, Omatolasi abangu-1
Indawo ethule emgwaqweni ongasekho onikeza ukufinyelela ngqo echibini! Leli khaya lisendaweni enhle eseduze nezindawo zokudlela zasendaweni futhi ibanga elifushane nje ukusuka emfuleni omncane obomvu nezindawo eziningi zokudoba ama-trout!
Ukungena ngaphandle kokuthintwa futhi ungene ngesistimu yokukhiya ikhaya ka-Agasti. Abanikazi bezindlu basendaweni futhi bayatholakala. Kwabiwe izindawo zangaphandle.